အသည်းပြည်တည်နာ | Page5| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အသည်းထဲမှာ ပြည်တွေ အစုလိုက်ဖြစ်နေတာကို ပြည်တည်တယ်လို့ ခေါ်ပြီးတော့ ဒီကနေပြီးတော့ ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ပြဿနာတွေ မဖြစ်လာအောင် ကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါတယ်။
>> အသည်းထဲမှာ ပြည် ဘာကြောင့်တည်သလဲ?
အများအားဖြင့်တော့ ဘက်တီးရီးယားပိုး၊ ကပ်ပါးပိုးတွေနဲ့ မှိုတွေစွဲလို့ အသည်းပြည်တည်ရပါတယ်။ ပြည်တည်စေတဲ့ ပိုးအမျိုးအစားအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့မှ ပြည်တည်နာတွေကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ဒီပြည်တည်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေက အသည်းကနေပြီးတော့ -
● ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ သည်းခြေအိတ်၊ သည်းခြေပြွန်၊ အူ၊ အူအတက် အခြားအင်္ဂါတွေဆီ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သလို
● သွေးကြောတွေထဲကနေမှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အသည်းနဲ့ ဝေးတဲ့အခြားနေရာတွေဆီကိုလည်း ပျံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
● ခွဲစိတ်ပြီးနောက် (သို့) အသည်းကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက်တွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> အသည်းထဲမှာ ပြည်တည်နေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ
အသည်းထဲမှာ ပြည် စတည်ရာကနေပြီးတော့ ၂-၄ ပတ်လောက်ကြာမှ လက္ခဏာပြတတ်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့ -
● ချမ်းတုန် ဖျားခြင်း၊ ချွေးများထွက်ခြင်း
● နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းခြင်း
● ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ပိုင်း ညာဘက်မှာ အောင့်ခြင်း
● ကိုယ်အလေးချိန် ကျခြင်း
● ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ (သို့) ပျို့အန်ခြင်း
● ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း (သို့) ၂ ခုလုံးဖြစ်ခြင်း
● ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ပခုံးနာခြင်း
● မျက်လုံးနှင့် အသားအရေများ ဝါခြင်း (အသားဝါ)
ပြည်တည်နာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ကုသဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပြည်တည်နာမျိုးလည်း ဆိုတာကို သိဖို့အတွက် အရေပြားကနေပြီးတော့ ပြည်တည်နာရှိတဲ့နေရာအထိ အပ်ထိုးပြီးတော့ ပြည်အနည်းငယ်ကို နမူနာ စုပ်ယူရပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ဆေးရုံမှာ ကုထုံးစပြီးတော့မှ အိမ်မှာ ဆက်ပြီးတော့ ကုစေပါတယ်။ ကုထုံးတွေကတော့ -
● ပိုးသတ်ဆေး စတဲ့ ဆေးတွေကို သွေးကြောကနေတစ်ဆင့် သွင်းပြီး ကုသနိုင်သလို သောက်ဆေးအနေနဲ့လည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးကို ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် (သို့) ဒီထက် ပိုပြီးတော့သောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
● ပြည်တည်နာထဲမှာရှိတဲ့ ပြည်တွေကို ဖောက်ထုတ်ခြင်း - ဆရာဝန်က အပ် (သို့) ပြွန်သုံးပြီးတော့ အရေပြားကနေတစ်ဆင့် ပြည်တွေကို ဖောက်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုဆိုးတဲ့အနာတွေမှာတော့ ဆရာဝန်က အရေပြားမှာ အသည်းကို ရောက်ဖို့အတွက် အရေပြားမှာ ဓားရာပေးဖို့ လိုပါတယ်။
● အများအားဖြင့် ကုသမှုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ အာထရာဆောင်း၊ CT, MRI စတာတွေ ရိုက်ပြီးတော့ ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
>> အသည်းပြည်တည်နာရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ
● ပြည်တည်နာ ပေါက်ထွက်ခြင်း
● ရောဂါပိုးတွေက ဝမ်းဗိုက်ထဲ၊ အဆုတ်၊ နှလုံး၊ ဦးနှောက်နဲ့ မျက်လုံးတွေဆီကို ပျံ့သွားခြင်း
● အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> ဆရာဝန် ဘယ်အချိန်သွားပြဖို့လိုလဲ?
အောက်ပါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်မျိုးခံစားရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်သွားပြပါ။
● ဆေးသောက်နေပေမယ့်လည်း ဖျားတာ၊ ဗိုက်အောင့်တာတွေက မပျောက်ဘဲနဲ့ ပိုဆိုးလာရင်
● မျက်လုံးနဲ့ အသားတွေ ဝါလာရင်
● အသက်ရှူရ ခက်လာရင် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို သွားပြပါ။